လော ရှည် - က တဲ့ ပွဲ: ရေးပေးပါ။
ကိုယ်ပိုင်ပန်းခင်းလေးက Tag လုပ်လို့ ရေးလိုက်ရပါတယ်။ စာတမ်းကိစ္စနဲ့ အရမ်းအလုပ်ရှုပ်နေလို့ ခုမှပဲ ရေးဖြစ်တော့တယ်။ စရေးပြီ။
ကိုယ့်နာမည် - လောရှည် လေ။
ကိုယ့်ကို သူငယ်ချင်းတွေက ဒီလိုခေါ်တယ် - ထောင်ထောင်၊ နီယို၊ မောင်လောရှည်၊ မေလောရှောင်။
ဒီမှာနေတယ် - စင်ကာပူ။
ကိုယ့်ဆီဖုန်းဆက်ချင်ရင် - လျှောက်လွှာအရင်တင်ပါ။ (Comment ပေးပြီးတော့)။
အရောင်ဆိုရင် - မိုးပြာရောင်၊ အ၀ါရောင်၊ ဖက်ဖူးစိမ်းနုနု၊ အနီရောင်၊ အနက်ရောင်၊ အဖြူရောင်၊ မီးခိုးအမျိုးမျိုး။
အ၀တ်အစားဆိုရင် - Baggy Jeans, Rappers' Ware။
အစားအစာဆိုရင် - စားလို့ရတာ အကုန် (ကိုရီးယားစာ မပါ)။
ပစ္စည်းဆိုရင် - ရှေးဟောင်း ပစ္စည်း ထုကြီးထည်ကြီး၊ သစ်သစ်လွင်လွင် တောက်တောက်ပြောင်ပြောင်။
သီချင်းဆိုရင် - Heavy Rock မှ လွဲ၍။
စာရေးဆရာ - Isaac Asimov။
စာအုပ် - Foundation Trilogy (Foundation, Foundation and Empire and Second Foundation)။
Life Style - တက္ကသိုလ်မှာ သုတေသနလုပ်တဲ့ ပါမောက္ခ၊ (ဒါမှမဟုတ် အလွန်အောင်မြင်သော နည်းပညာ စွန့်ဦးတီထွင် လုပ်ငန်းရှင်)။
ကိုယ့်ရဲ့ဝါသနာ - ဂိမ်းဆော့တယ်၊ ရုပ်ရှင်ကြည့်တယ်။ (ဂျပန်ကာတွန်း ကြည့်တယ်)။
အလိုချင်ဆုံးလက်ဆောင် - သိမ်းရလွယ်၊ သယ်ရလွယ်၊ ပေးချင်စိတ်ရှိလို့ ပေးတာ အားလုံး။
ကိုယ့်ရဲ့ အချစ်ဆုံးသူက - ပြောဝူး။ သတ်ပစ်လိုက်။
ကိုယ့်ရဲ့ အလေးစားဆုံးသူက - Roy Mustang (စိတ်တော့မကောင်းဝူး၊ ကာတွန်းဇာတ်ကောင် ဖစ်နေတယ်။)
ကိုယ့်ရဲ့ အခင်ဆုံး သူငယ်ချင်းက - များကြီးပဲဗျ။
ကိုယ့်ကို နားလည်မှု အပေးနိုင်ဆုံးက - ညီလေး။
ကိုယ့်ရဲ့ အမုန်းဆုံးသူက - ပြောဝူး။ (ပြောရင် ဒီကောင်ထွက်ပြေးသွားမှာပေါ့။)
ရင်အခုန်ဆုံးအချိန် - အဖြေကို စောင့်နေရတဲ့ အချိန် (စာမေးပွဲ အောင်စာရင်းလိုဟာမျိုး၊ ပညာသင်ဆု လျှောက်လွှာ ရလဒ်လိုဟာမျိုးကို ဆိုလိုသည်။)
အကြောက်ဆုံးအချိန် - ကိုယ့်ကို စိတ်ဆိုးခံရတဲ့အချိန် (ဆော်ပလော်တီးမှာ ကြောက်ရို့)။
အပျော်ဆုံးအချိန် - ညီလေးနဲ့ Acclaim's WWF Wrestle Mania (16 bit) Sega Genesis Version ကို ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ Emulator နဲ့ ဆော့ရတဲ့အချိန်။
အမှတ်တရနေ့ - ငါးတန်းတုန်းက အတန်းထဲမှာ ပထမရတဲ့နေ့။
အချစ်ဆိုတာ - ညံ့ပါ့၊ ဒါလေးတောင် မသိဘူးလား။ (ငါလဲ တိပါဝူး)။
အမုန်းဆိုတာ - မသိချင်စမ်းပါနဲ့။
အလွမ်းဆိုတာ - ဒါလဲ မသိချင်စမ်းပါနဲ့။ (ပြောပြလို့မရဘူးကွ။)
သံယောဇဉ်ဆိုတာ - ငြိတွယ်ခြင်း။
ဘ၀ဆိုတာ - မိုးလင်းတိုင်း ဒီနေ့ ဘာဖြစ်မလဲ သိချင်လို့ ရှာဖွေကြည့်ရတာ။ (ကျော်ကြည့်လို့လဲ မရဘူး)
သူငယ်ချင်းဆိုတာ - များလေကောင်းလေ။
ချစ်သူဆိုတာ - နည်းလေကောင်းလေ။ n ယောက်ရှိရင် အနည်းဆုံး n-1 ခါ အသည်းကွဲလိမ့်မယ်။ (ဒါတောင် တယောက်ကိုရမှ၊ မရရင် n ခါအသည်းကွဲလိမ့်မယ်။)
ကိုယ့်ကိုယ့်ကိုယ် ဒီလိုထင်တယ် - ဥစ္စာပေါ၊ ရုပ်ချော၊ သဘောဖြူ၊ အူစင်း၊ သမာသမတ်ကျ၊ အကုန်သိ၊ အကုန်တတ်၊ အကုန်နားလည်၊ မြင့်မြတ်၊ စင်ကြယ် ... ခွိ ခွိ ။
ကိုယ့်ရဲ့ လက်စွဲဆောင်ပုဒ်က - Do It Now !
အပြောချင်ဆုံး စကားတခွန်း - I am very glad to be in this very spot, to give this acceptance speech for this year's Alan Turing Award and to be the first South East Asian to grab this award.
Posted by Law Shay at 4:46 AM
မေ့လျော့ခံထားရသော Hip-Hop ပညာရှင်များ (၁): Run-D.M.C
ငါးထမင်းနယ် (ရှမ်းထမင်းချဉ်) လုပ်နည်း